IVeria Suite - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGiannis - Menia
UGiannis - Menia yi-Superhost
Indawo entle, ehlaziywe ngokupheleleyo kwidolophu yaseVeria. Indawo ilungile ukonwabela zombini iziko ledolophu lembali kunye nelendawo, lizele ziivenkile ze-chic, iiresityu, iivenkile zekofu kunye neethaveni. Umgama nje ozimitha ezingama-50 ukusuka kwisibingelelo sikampostile uPawulos, iSinagoge yamaYuda nezinye iindawo ezibalulekileyo.
Uya kuyithanda, ngenxa yendawo yayo entle, i-ambiance kunye nommelwane omangalisayo.
IMyuziyam yaseVergina yeArchaeological Museum ikumgama nje ali-12km !!!
Indawo yokupaka yasimahla ngaphandle nje kwendlu kwindawo evulekileyo !!!
Le ndawo lolona khetho lufanelekileyo lokuhlala okutofotofo kunye nokonwaba kwasentliziyweni yeVeria kuye nabani na ofuna ukonwabela ubomi obudlamkileyo besixeko kwaye kwangaxeshanye achithe ixesha lokuphumla.
Indawo yokuhlala evulekileyo enekhitshi enesitayile kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo, amagumbi okulala ama-2, igumbi lokuhlambela elineshawa ye-hydromassage kunye nebalcony ejonge epakini, iya kwenza ukuba ukuhlala kwakho kukhululeke nokuba uhamba ngomsebenzi, uliqela labahlobo abandwendwelayo. ulonwabo okanye usapho olundwendwela isixeko!
- Umnyango wokhuseleko kunye nekhadi lokhuseleko.
- Iifestile ezimbini zeglasi ezikhusela isandi.
- Iiyunithi ezi-2 ze-Inverter A/C zokupholisa kunye nokufudumeza.
- Iibhedi ezinkulu ezimbini kuwo omabini amagumbi.
-Isofa eguqulwa ibe yibhedi eyongezelelweyo ebanzi ephindwe kabini (2.00 x 1.40).
- I-closet enkulu ene-hangers kwigumbi lokulala.
Ikhitshi enezixhobo ngokupheleleyo (ifriji/ifriji, umpheki, ioveni yemicrowave, isiFrentshi
cofa umatshini wekofu, iketile, umenzi wethowusti).
- Ilinen etofotofo kunye neetawuli.
- Izinto zangasese zinikezelwe (njengeshampu kunye nejeli yeshawa).
-Iisokethi zombane ezibekwe kakuhle kwizixhobo.
- Ikiti yoncedo lokuqala kunye nesicima-mlilo.
- Isomisi seenwele, intsimbi, ibhodi yokuayina.
- Isantya esiphezulu Wi-Fi.
- Idesika yeofisi.
Indlu ibekwe kumbindi wesixeko.
Umgama nje ozimitha ezingama-50 ukusuka kwisibingelelo sikampostile uPawulos.
Umgama nje ozimitha ezili-100 ukusuka kwindlu yesikhungu yamaYuda kunye nommelwane.
Kuluhlu lwe-50m-100m ukusuka kwindlu, unokufumana i-super market, ivenkile yegrosari, ivenkile yenyama, indawo yokubhaka, ifama yeentlanzi, ibhanki kunye ne-ATM.
Ungonwabela iindawo zokutyela ezinkulu, iivenkile zekofu, iithaveni kunye neevenkile ezikufutshane.
IMyuziyam yaseVergina yeArchaeological Museum ikumgama nje oyi-12km ukusuka kwisixeko.
I-Seli Ski Resort ikwi-24km nje, kunye ne-3-5 Pigadia Ski Resort ikumgama nje oyi-38km ukusuka eVeria.
Kukho neelwandle ezinkulu ezikufutshane, malunga ne-35-40km kude neVeria.
Siqinisekile ukuba amava akho okutyelela indawo yethu kunye nesixeko sethu asiyi kulibaleka!
Umbuki zindwendwe ngu- Giannis - Menia
Siyazamkela iindwendwe zethu ngokobuqu kwaye sihlala sinazo ngalo naluphi na ulwazi olongezelelweyo okanye inkonzo abanokuthi bayifune. Eyona nto iphambili kuthi kukuphendula ngoko nangoko kuyo yonke imibuzo yeendwendwe zethu. Sifumaneka nanini na. Nceda usebenzise le ndlela yonxibelelwano yakwa-Airbnb njengoko sifumana ngokukhawuleza yonke imiyalezo. Sikwayavuya ukucebisa iindawo ezinomdla kwaye ezifanelekileyo ukuzindwendwela.
Siyazamkela iindwendwe zethu ngokobuqu kwaye sihlala sinazo ngalo naluphi na ulwazi olongezelelweyo okanye inkonzo abanokuthi bayifune. Eyona nto iphambili kuthi kukuphendula ngoko…
Inombolo yomthetho: 00000148331